ရက်ပေါင်း ၅၀၀ နှင့်အထက် - PMO ကိုမှီခိုခြင်းမပြုသောဘဝပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်များနှင့်အတွေ့အကြုံများစွာကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်မှအတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်
ငါ 500 ရက်ပေါင်းကျော်ရောက်ရှိကြပေမယ့်ဆိတ်ကွယ်ရာအနည်းငယ်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေများကနေမည်သူမဆိုနဲ့ငါ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမှတ်တမ်းတင်သို့မဟုတ် shared ဖူးဘူး။ ယခုတွင်ငါသည်စကားများထဲသို့ရှုထောင့်သို့အရာခပ်သိမ်းထားရန်ကောင်းတစ်ဦးအချိန်ဖြစ်ပါသည်ထင်ပါတယ်။
ငါအရင်ကမတိုင်မီ nofap ပွုပါပွီ။ အဆိုပါ 90 နေ့ကအမှတ်တစ်ဝှမ်းအောင်မြင်ထိုကာလအတွက်ကျွန်မအလုပ်သစ်အသစ်ရည်းစားရတယ်, လေ့ကျင့်ခန်းခံခဲ့ရသည်။ အတော်များများကအေးအမှုအရာ။ အရာအားလုံးသတ်မှတ်ကောင်းစွာအရာအားလုံးသွားခဲ့ပါသည်တစ်ချိန်ကသို့သော်လည်းငါသည်စဉ်းစား၏အမှားဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါနောက်ကျော PMO သွား. အရာရာပုံမှန်ပြန်သွားလေ၏။ အလုပ်, ပျင်းရိ, အဝလွန်, မကောင်းတဲ့ကြားဆက်ဆံရေးမကြိုက်ဘူး။
ငါအလုပ် left နှင့်တစ်နှစ်အပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါဘာပဲငါပြီးပြည့်စုံဆန့်ကျင်ဘက်ပြုပါမည်ဟုမှားသွားကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ တဖန်ငါ nofap လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ပြန်သွားရဘူး။ ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်ဒါအလွန်ခဲယဉ်းသည်။ သင်တို့သည်ဤမျှ PMO မှစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံနေကြပေမယ့်အစဉ်မပြတ်ငါမျက်မှောက်၌အဆုံးရည်မှန်းချက်ရှိခဲ့သည်။
90 ရက်ပေါင်းအားဖြင့်သွား၏။ ငါအများကြီးပိုပြီးပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ အထွက်။ Talk ။ ယုံကြည်မှု။ အရာအားလုံးကိုအရပျသို့ကျဆင်း။
တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါအချိန်အလုပ်များကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိုထား၏။ အလုပ်အဖွဲ့, လုပ်အားပေး, socializing, ဖတ်ရှုခြင်း, ကျင့်သုံး။ အိမ်သူအိမ်သားများထဲကငါ့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဘာမှမ။ ဘဝကပဲဒါကြောင့်ပိုပြီးပျော်စရာသလိုပဲ။ ငါကငါ့အဦးနှောက်ယခုဆို PMO ရတဲ့မခံခဲ့ရကြောင်းကန်ဘောအားလုံးကိုအချိန်ရှာဖွေနေခဲ့သည်ထင်ပါတယ်။
ငါရဝမ်ဒါ, အိန္ဒိယ, ဂျာမနီ, တန်ဇန်းနီးယား, အိုင်ယာလန်, ဘရာဇီးလ်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံအများအပြားသွားရောက်လည်ပတ်ပြီ 500 ကာလ၌။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်သွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်ငါနေဆဲ PMO'ing ခဲ့သည်ဆိုပါကကျွန်မထင်မဆိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိဖို့ဘောလုံးခဲ့ကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ငါဘယ်လိုမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်လူငယ်များဆုံးမဩဝါဒပေးမယ့်ဝေးလံခေါင်ဖျားရွာများတွင် 10 ပတ်တန်ဇန်းနီးယားမှာရှိတဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်း။ တစ်ခုခုငါမတိုင်မီပွုပါပွီဘယ်တော့မှလိမ့်မယ်။
ငါ Streak ၏ 90 ရက်ပေါင်းန်းကျင်မှာစီးပွားရေးအတွက်ဆရာမဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်ယခု 500 + မှာငါသင်ကြားမှုကနေငါလိုချင်တာတွေသင်ယူကြပြီဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဆက်လက်အပေါ်ရွှေ့ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ငါပြန်ရောက်သွားတယ်လျှင်အစဉ်အမြဲငါဘဝမှာငါကဖြစ်ပျက်မည်မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်ချသည်ဟုအတွေးနှင့်အတူပြုကြပြီမယ်လို့ stupidest အရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခံစားရပါတယ်။ ငါ PMO အပေါ်မှီခိုခြင်းနှင့်စစ်မှန်သောအပြန်အလှန်စွဲလမ်းမဟုတ်, ငါ့ဦးနှောက်ထဲကနေအသက်တာကိုပြောင်းလဲဖြစ်ရပ်များနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုလည်းအများအပြားရရှိခဲ့တယ်။ Relapsing ပင်တစ်ခု option ကိုမဟုတ်ပါဘူး။
ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဖြစ်၏။ ရိုးရိုးသားသားနှင့်ကမ္ဘာအတွက်ဘာမှအဘို့အဆင်သင့်ကုန်ကြမ်း။ ငါနေဆဲတွေ့ကြုံခံစားဖို့အများကြီးနဲ့သင်ယူဖို့အများကြီးရှိသည်။
ငါသည်ဤခရီးကနေလေ့လာသင်ယူကြပါပြီဘာမှလည်းမရှိဆိုပါက nofap စတင်. နှင့် PMO မဟုတ်ဖို့ပြဌာန်းခွင့်ရှိခြင်းပဲအစအဦးဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ကသင်ကိုယ်သင်ပေးထားသောနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်သင်၏အကန့်သတ်နိုင်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်နှင့်တွန်းကြပြီဒီအထူးအခွင့်အလမ်းကိုယူရမယ်ကိုအကောင်းဆုံးအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေရန်။ သငျသညျပန်းတိုင်တစ်ခုထားရောက်ရှိခဲ့ပါပြီပြီးတာနဲ့။ လူသစ်တွေလုပ်ပါ။ ကျေနပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျေနပ်လူတွေအနေနဲ့အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာ၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးတို့ကို၌သေစေသည်အရာဖြစ်တယ်။
LINK - ရက်ပေါင်း ၅၀၀+ ပထမ ဦး ဆုံးပို့စ်တင်သည် .. ..